घर किन्नेलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋ’ण दिँदै बैंकहरू, कुन बैंककाे ब्याजदर कति, के के चाहिन्छ कागजात ? – Sanchar Patrika
काठमाडौं : पैसा थुप्रिएपछि घर किन्नलाई बैंकहरुबीच सस्तो ब्याज दरको अफर ल्याउने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । पर्याप्त तरलता भएकाले पछिल्लो समयमा अधिकांश बैंकहरुको आधार दर घट्दै जाँदा ब्याजदर सस्तिएको नविल बैंककी रिटेल लेन्डिङ प्रमुख चाँदनी श्रेष्ठले जानकारी दिइन्। ‘ग्राहकसँग हामीले लिने ब्याजदर आधार दरमा भर पर्छ, अहिले पर्याप्त तरलता भएकाले आधार दर घट्दै गएको छ, त्यसकारण केही वर्षनै ब्याजदर नबढ्न सक्छ’ उनले भनिन्।
को’रोनाको प्रभावपछि ठूला उद्योग व्यवसायमा ऋ’णको पर्याप्त माग हुन सकिरहेको छैन। जसले गर्दा बैंकहरुबाट प्रवाह हुने ऋ’णमा कमी आएको छ। यसले बैंकहरुमै पैसा थुप्रिएको छ। अधिकांश बैंकहरुले एक वर्षसम्म ग्राहकबाट लिइने ब्याजदर नबढाउने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् । हालै निक्षेपमा ब्याजदर घटाएर बैंकहरुले नयाँ घर, गाडी किन्न सस्तो ब्याजको अफर ल्याउन थालेका हुन् ।
घर र गाडीमा बैंकहरुबीच सस्तो ब्याजदरमा ऋ’ण दिने प्रतिस्पर्धा नै देखिएको छ। एभरेष्ट बैंकले सस्तो ब्याजदरमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मको हाउजिङ लोन योजना ल्याएको छ।
यस योजनामा बैंकले आधार दरमा जम्मा ०.२ प्रतिशतदेखि २ प्रतिशतसम्मको ब्याज मात्रै लिने जनाएको छ। असार मसान्तसम्म बैंकको आधार दर जम्मा ८.०५ प्रतिशत मात्रै छ । यस अनुसार हाउजिङ लोन लिनेले जम्मा ८. २५ देखि १० प्रतिशतको बीचमै ऋ’ण पाउने छन्। त्यस्तै गाडी कर्जाका लागि पनि बैंकले आधार दरमा जम्मा १. ५ प्रतिशत मात्रै ब्याज लिने भएको छ।
असार मसान्तसम्मको आधार दरअनुसार साढे ९ प्रतिशतमा बैंकले गाडी कर्जा दिनेछ। त्यस्तै हिमालयनले घर र गाडी किन्न चाहनेलाई ८. ४९ प्रतिशत ब्याजदरमै ऋ’ण दिने भएको छ। सनराइज बैंकले ८. ९५ प्रतिशतको ब्याजमा घर किन्नका लागि कर्जा दिने गरी योजना ल्याएको छ। बैंकले घर किन्नका लागि ४० वर्षसम्मको अवधिका लागि यस्तो कर्जा योजना ल्याएको हो।
एनआइसी एसिया बैंकले ८. २५ प्रतिशतमै घर र गाडी कर्जा दिने योजना ल्याएको छ। ग्लोबल आइएमई बैंकले ग्लोबल घर कर्जा अन्तर्गत सेवाग्राहीले २५ वर्षसम्मको अवधिका लागि ८.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा घर कर्जा लिन पाउने छन् र यो कर्जाको ब्याजदर १ वर्षसम्म स्थिर रहने बैंकले जनाएको छ। यसैगरी बैंकले ८. ९९ प्रतिशतमा गाडी कर्जा दिने योजना ल्याएको छ।
नविल बैंकले वार्षिकोत्सवको अवसरमा सीमित अवधिको लागि भन्दै ७. ९९ प्रतिशत ब्याजदरमै घर किन्न कर्जा दिने योजना ल्याएको छ । सानिमा बैंकले १ वर्षसम्म ब्याज नबढ्ने गरी सवारी कर्जा योजना ल्याएको छ । सिद्धार्थ बैंकले १ वर्षसम्म ब्याज नबढ्ने गरी घरकर्जा योजना ल्याएको छ। यसको ब्याजदर ९. २५ प्रतिशत छ। त्यस्तै नेपाल बैंकले ७. ९९ प्रतिशतमा घर किन्न र नयाँ घर बनाउन कर्जा दिने योजना ल्याएको छ।राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ७. २५ प्रतिशत ब्याजमा घर कर्जा दिने योजना सार्वजनिक गरेको छ। यी मात्रै होइन, अधिकांश बैंकहरुले घर र गाडी कर्जाको ब्याजदर एकल अंक (बढीमा ९.९) प्रतिशतमा झारेका छन्।
घरजग्गा कर्जाका लागि के के चाहिन्छ कागजात ? बैंकबाट घर, जग्गाको ऋ’ण लिनेले सोको कागजपत्र धितो राख्नुपर्छ। यदी जग्गा छ भने जग्गाको लालपूर्जा र चारकिल्ला प्रमाणित कागज चाहिन्छ। त्यस्तै जग्गाको नक्सा प्रिन्ट भने बैंकले नै निकालिदिने गरेका छन्। ‘यसबाट ऋ’णीलाई नापी वा मालपोत कार्यालय गइरहनुपर्ने झन्झट रहन्न भने वास्तविक जग्गाको एकीन गर्न बैंकहरुलाई पनि मद्दत पुग्छ।
त्यस्तै बनेको घर किन्नका लागि जग्गाको लालपूर्जासहित घरको नक्सापास, इजाजत पत्र, निर्माण सम्पन्नको कागजात पनि चाहिन्छ। ऋ’णीले आफ्नो आम्दानीको स्रोत खुल्ने प्रमाणित कागज पनि बैंकमा बुझाउनुपर्छ। ऋण लिनका लागि ती कागजात बैंकमा बुझाएपछि बैंकले मूल्याङ्याङ्कनकर्ता (भ्यालुएटर) लाई प्रदान गर्दछन्। भ्यालुएटरले सोका आधारमा घर वा जग्गा एकीन गर्दछ, त्यसको मूल्य पनि निर्धारण गर्दछ, सोही निर्धारित मूल्यबाट नै बैंकबाट पाइने उच्चतम ऋ’ण तय हुन्छ।
‘त्यसपछि ग्राहकले सो बराबरको ऋ’णका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति दिएपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ’ रिटेल, लेन्डिङ प्रमुख श्रेष्ठले भनिन्। उनका अनुसार प्रक्रिया अघि बढेको ३–४ दिनमै ऋण स्वीकृत हुने, नहुनेबारे निर्णय दिइने छ। भ्यालुएटरको टिमले सरकारले तोकेको र चलनचल्तीको दर दुवैलाई मूल्याङ्कन गरी मूल्य निर्धारण गर्दछ। यसमा पनि चलनचल्तीको मूल्यलाई बढी ध्यान दिने गरिएको छ।
चलनचल्तीको मूल्यलाई ५० देखि ७० प्रतिशत र सरकारी दरलाई ३०देखि ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मूल्याङ्कन गरी भ्यालूएटरले समग्र मूल्य निर्धारण गर्ने गरेका छन्। भ्यालुएटरले तय गरेको मूल्यमा ६० प्रतिशतसम्म र पहिलो पटक घर वा जग्गा किन्नेलाई बैंकहरुले ७० प्रतिशतसम्म ऋ’ण प्रदान गर्दै आएका छन्।
कति लाग्छ सेवा शुल्क ? क वर्गका बैंकले जति ऋ’ण दिने हाे साेकाे ०‍‍ दशमलव ७५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रशासनिक शुल्क लिन पाउँदैनन्। अर्थात १ कराेड रुपैयाँ ऋ’ण लिनेबाट क वर्गका बैंकले प्रशासनिक शुल्कवापत ७५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिन पाउँदैनन्। तर बैंकले साेभन्दा तल यस्ताे शुल्क लिन सक्नेछन्। याे त भयाे बैंकहरुले लिने सेवा शुल्क। अबघर वा जग्गाकाे मूल्याङ्कनका लागि खटिने भ्यालुएटरले लिने सेवा शुल्क पनि ऋ’णीले नै ति’र्नुपर्दछ। त्यस्तै मालपाेतमा घर वा जग्गा रोक्काका लागि लाग्ने शुल्क ऋ’णीले तिर्नुपर्छ। क’र्जा सूचना केन्द्रमा पनि सामान्य शुल्क लाग्ने गर्दछ।
Prevयसकारण छोराछोरी पढाउँदैनन् राउटे